कमल थापालाई बुझ्नै गाह्रो, फेरि खम्बाझै उभिए राजाको पक्षमा ! – Points Nepal
कमल थापालाई बुझ्नै गाह्रो, फेरि खम्बाझै उभिए राजाको पक्षमा !
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २८, २०७८ समय: ११:४९:३५
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापा पछिल्लो केही समय राजा विरोधी बनेर अभिव्यक्ती दिइरहे । तर थापा राजाको पक्षमा अभिव्यक्ती दिन थालेका छन् । पार्टीको चुनावमा पराजित भएयता पहिलोपटक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबारे सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।
Last Updated on: January 12th, 2022 at 11:50 am